Home Wararka Gaari qarax-siday oo lagu qabtay deegaano dhaca gobolka Galgaduud
Gaari qarax-siday oo lagu qabtay deegaano dhaca gobolka Galgaduud
Wararka naga oo gaaraya degmada Caabudwaaq ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada Ammaanka maamulka Galmudug ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Gaariga ayaa la qabtay Kontoroolka laga soo galo Magaalada Caabudwaaq, waxaana ay hadda ku socda Baaritaano kala duwan.
Gaariga la qabtay ayaa la sheegay in jiraan shaqsiyaad la socday oo ay sidoo kale gacanta ku dhigeen Ciidanka Galmudug.
Saraakiisha Ciidanka Ammaanka Galmudug ayaa lagu waddaa in ay saacaddaha soo socda ay faahfaahin ka bixiyaan gaariga sidday waxyaabaha Qarxa ee ay gacanta ku dhigeen.
Previous articleGudigga Difaaca oo sheegay in Gudi loo saaray Weerarkii Hotel Saxafi
Next articleShir lagu heshiisiinaayo Oromada iyo Soomaalida oo Addis Abba ka furmayo
Madaxweyne Deni oo soo saaray war dad-badan farxad geliyay(Aqriso)
[Akhriso] Mooshinka Muddo kororsiga Aqalka Hoose ee Golaha Shacabka iyo ku...